Suuqa Hore iyo Suuqa Cusub. Waa adiga | Martech Zone
Markii aan akhrinayay cilmi-baaris ku saabsan goobta Alteria, waxaan ku dhacay jaantuskan cajiibka ah ee iyaga ku saabsan hawlgelinta macaamiisha bogga. Jaantusku wuxuu si wax ku ool ah u muujinayaa sida suuq-geynta isu bedeshay. Dib-u-eegista jaantuskan, waa inay si cad u caddeysaa inay suuq-geyntaadu isbeddelay iyo in kale.
Ma u xuubsiibtay Suuqgeeye? Shirkaddaadu ma leedahay?
Maanta waxaan waqti la qaatay 3 rajo oo kala duwan iyo sababaha guud ee ay u horumari waayeen cabsi, Khayraadka, Iyo khibrad. Waxaan u maleynayaa inay tani tilmaamayso sababta ay muhiim u tahay in la sii haysto kaalmada a lataliyaha suuq geynta internetka. Waxay ku siin karaan shirkaddaada natiijooyin la qiyaasi karo iyo siyaabo wax ku ool ah oo lagu yareeyo ilaha loo baahan yahay… dhammaantood iyadoo la tirtirayo cabsida.
Tags: adqeexida astaantadaaweyniskaashiga emaylkais-taabasho badanshaqsiyeynta internetkawax soo saarkatikniyoolajiyadda iibkahawlgelinta goobtaWordPress
Iska jir Internet-ka Caan ka ah
Sep 24, 2009 at 11: 40 AM
Suuqgeynta maanta waxay sidoo kale ku lug leedahay qadar culus oo tiknoolajiyad ah sababta oo ah habka isgaarsiinta ay u noqotay qeyb muhiim u ah deegaankeena. Dhammaan "xirmooyinka saacadaha gacanta". in ka badan 50-ka qof kuma qanacsana tiknoolajiyadda walina ma fahmin barta wax lagu qoro oo aad uga yar tweeting-ka iyo dhammaan inta kale ee 'walxaha' ah ee sida degdegga ah noogu soo socota. Markaad sheegto, Doug, lataliyaha khadka tooska ah waa mid aad muhiim u ah wuxuuna leeyahay laba door oo waaweyn maanta: tababar iyo kalsooni .. Kaliya markaa cabsida ayaa bilaaban doonta in laga takhaluso.
Sep 24, 2009 at 2: 44 PM
Ma hubo in 'ka weyn 50' sheegashadu ay run tahay mar dambe, in kastoo. Kordhinta shabakadaha sida facebook waxay u arkeen koboc dhaqso leh dadka waayeelka ah marka loo eego kuwa ka yar. Dhallinyaradu si dhakhso ah ayey u korsadaan, laakiin dadka waayeelka ahi waxay korsadaan markay arkaan qiimaha. Waxaan hayaa shabakad bulsheed oo loogu talagalay Vets Navy halkaas oo celcelis ahaan da'da ay ka sarreyso 50 - dadkaasna waxay soo rogayaan sawirro, wadaan boggagooda gaarka ah, ka qayb qaadashada golayaasha… runtii way isku xirnaayeen!
Oktoobar 4, 2009 at 9:56 AM
Waxaan ka weynahay 50 waxaanan jeclahay saacaddayda curcurka. Anigu waxaan leeyahay ePortfolio lacag la’aan ah oo martigaliya ganacsiga laakiin waxaan ku raacsanahay Jim in 50-ka ka badan aysan ku qanacsaneyn tiknoolajiyadda. Macallin ahaan eBusiness iyo sidoo kale inaan sannado badan la dagaallamayey ardayda jaamacadaha dhigata ee aan ku qanacsanayn sidoo kale. Ilaahay baa ku mahadsan Facebook-ga maadaama uu beddelay muuqaalka. Hadda waxaan dhahayaa - ma isticmaashaa Facebook-ga oo hadday jawaabtu haa tahay (oo inta badan ay tahay) markaa waxaan si fiican u leeyahay waxaad isticmaali kartaa baloog, wiki, twitter ama warbaahin kale markaa. Tani waxay ka bilaabaneysaa 50-ka sano laakiin waa gaabis. Arrinta ugu weyn ee aan ku dhiirrigelinayo isticmaalka ePortfolio waa macallimiinta, maahan ardayda. Waxaan soo bandhigay latalinta ardayda ee macalimiinta runti sifiican ayey ushaqeyneysaa. Tababar iyo kalsooni ayaa fure u ah. Waad ku mahadsantahay boostada. Salaan, Ian Knox
Sep 24, 2009 at 1: 05 PM
Waan ku raacsanahay dhammaan qodobbadaada, marka laga reebo, WAANU OGNAHAY - Suuqgeeyayaal ahaan, wax badan ayaan ka ognahay suuqyadeena iyo macaamiisheenna ka dib waxaan ku sameyn jirnay qaabkii hore, laakiin weli waxaa jira baahi loo qabo fara-gelin iyo ka-boodbood ku kalsoonaanta suuqgeynta maanta.
Sep 24, 2009 at 2: 45 PM
Haa, laga yaabee inay sifiican uga fiicnaan lahaayeen iyagoo sheegaya 'Waan ogaan karnaa'. 🙂 Waxaan u maleynayaa inuu asalkiisu yahay inaanan mar dambe ku dhaqmin caqliga oo keliya. Maanta waxaan BETTER sameynaa cilmi baaris si aan uga caawinno go'aannada suuqgeyntayada!
Oktoobar 5, 2009 at 3:13 PM
Kula heshii adiga Lorraine. Waxaan ugu dhowaan karnaa "garashada" innagoo haysanno xog aad uga wanaagsan falanqaynta. Waxaa jira mala awaal yar oo ku lug leh. Dhinacyada qaarkood, suuqgeynta maalmaha kahor intarneedka ayaa sahlaneyd iyadoo laheyd ikhtiyaarro aad uyar oo laga fiirsado: TV-ga, warbaahinta daabacan, suuqgeynta tooska ah ee boostada & codsi taleefan. Hadda xulashooyin badan oo loogu talagalay suuqgeynta internetka, gaar ahaan haysashada warbaahinta bulshada ee isku dhafka, xulashooyinka suuqgeynta ayaa aad uga kala duwan. Weli qiyaasta qaarkood waxay ku lug leedahay ikhtiyaarrada qarsoodiga ah ee aan macquul ahayn ee ku martiqaadaya fursadda iyo halista labadaba.
Oktoobar 6, 2009 at 6:09 AM
Ma ahan inay 'cusub' tahay, laakiin sidee looga fikiraa> Waan Imtixaaneynaa.